Alahady fankalazana ny Pantekôty – Trinitera Malagasy
Pantekôty : pentekostè hemera (amin’ny teny grika) milaza ny andro faha-dimampolo, ilay fety ankalazain’ny Jody fito herinandro aorian’ny Paka, antsoina koa hoe fetin’ny Herinandro, (Eks 34, 22//Lev 23, 15-22 // Det. 16, 9-12) fetin’ny Tompo, andro hahatsiarovan’ny Hebrio ny nipetrahany tany an’efitra tamin’ny tranolay (Tb 2,1). Raha fetin’ny santabokatra izany tany am-pihandohana, dia nanjary fety nahatsiarovana ny Fanekem-pihavanana kosa taty aoriana, izany hoe ny nahazoan’ny Zanak’Israely ny Lalàna (Torah). Tsy mahagaga ary, raha manisy tsindrim-peo amin’ny fomba fisehon’YHWH tany Sinai i Md Lioka rehefa mitantara ny Pantekôty vaovao, ho amin’ny Fiangonan’ny Mpino vao teraka, miorina amin’ilay Fanekem-pihavanana vaovao (Asa 2,1-11), manaiky hanaraka ny lalàna vaovao araka ny Fanahy.
Nony tonga izany andro izany, dia tafavory tao amin’ny trano anankiray ny Apostoly rehetra. ὁμοθυμαδόν (homothumadon) moa no ilazan’i Lioka ny hoe tafavory eto, io ihany moa hilazany ny firaisan-tsaina nentin’ireo Apostoly nivavaka tao amin’ilay efitrano ambony (Asa 1, 14). Tsy afaka ny handray ny Fanahy Masina manko izay tsy maharitra amin’ny fivavahana na izay tsy manaiky ho vatana iray ao amin’ny Eglizy, manaiky hiombona ho tena iray, miaraka amin’i Kristy Loha sy Filoha.
Ilay feo avy any an-danitra toy ny rivotra nifofofofo mafy, dia mampahatsiaro ny Zanak’Israely mihatrika ny fisehoan’YHWH (teofania) tany an-tendrombohitra Sinai (Eks 19), mampahatsiaro koa ny efitra lamba tao an-tempoly, triatra nisasaka roa tamin’ny ora nialan’i Jesoa aina (Lk 23, 44-45), ary ho an’i Matio dia miampy ny horohoron-tany sy ny vatolampy nitresaka (Mt 27, 51), izany rehetra izany no manambara fa tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho izay mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany (Jn 15, 13), izany no manambara ny hafenoan’ny Fisehoan’ilay Teny tonga nofo (plénitude de la Révélation).
Iraho ny Fanahinao ry Tompo, ilay fofon’ainao, dia havaozinao ny endriky ny tany (Sal 104, 34). Ny Fanahy manavao ny zavatra rehetra no ankalazaintsika amin’ny Pantekôty. Ilay lelafo (לָשׁוֹן אֵשׁ lashon esh = lela afo) lazain’Izaia fa mandoro sy mandevina izay manipaka ny Lalàn’YHWH sy maniratsira ny Tenin’ilay Masin’Israely (Izaia 5, 24) no zary lela mitarehin’afo (γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς, glossai Hosei puros) hampianatra azy ireo hiteny araka ny Fanahy.
Isaky ny mahita ny sarina lelafo eo ambonin’ny lohan’ny Apostoly isia araka izany dia tokony hahatsiaro fa ny Fanahy Masina no afaka mandoro izay rehetra manakana antsika tsy hampifanaraka ny fiainantsika amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Ary izay tarihin’ny Fanahy dia hampiasa ny lelany, izany hoe ny teniny, mba hampiombona fa tsy hanasaraka. Izay tarihin’ny Fanahy Masina dia tsy afaka ny hitoka-monina fa hiombona ao amin’ilay Jerosalema vaovao. Lazain’i Lioka mazava tsara, henontsika tamin’ny vakiteny I teo, fa monina ao Jerosalema avokoa ny Jody, ny olona mpivavaka rehetra teto ambonin’ny tany (and. 5).
Ny fahalalana teny samihafa, ny fitenenana teny tsy fantatra (glossolalie) dia tsy natao hisehosehoana sy hizahozahoana, fa mitaky adidy “hitory an’Andriamanitra amin’ny firenena rehetra mba hampiray ny fiteny rehetra hiara-hankatò ny finoana tokana” (prefasy). Tsara ho marihina fa na dia voalaza aza ny fahasamihafan’ny fiteny (Jen 10, 20) dia nohamafisin’ny Jenezy fa tany am-pihandohana dia “iray fiteny sy iray fanononana ny tany rehetra” (Jen 11,1). Ny teny araka izany dia natao hampiombona fa tsy hanasaraka. Noho ny fielezana anefa, dia nihevitra ny olona hanao tilikambo avo mahatakatra ny lanitra (Babela, Bab ilu – azo adika koa hoe vavahadin’Andriamanitra, na avy amin’ny babal, manafangaro) ho famantaram-piombonana. Tsy ny ezaky ny olombelona fa ny fanomezan’Andriamanitra no mampiombona antsika. Tsy afaka ny hiombona na oviana na oviana izay tsy mivory amin’ny trano iray iombonana, izay tsy manaiky hiakatra ao amin’ny Efitrano ambony mba hankalaza miaraka ny Eokaristia (Vakiteny I Asa 2, 1).
Tsy hoe sanatria mialona ny fikasan’ny olombelona Andriamanitra satria hoe “tsy hisy na inona na inona hahasakana ny olona tsy hanatanteraka izay kasainy hatao” (Jen 11, 6). Tsy fialonan’Andriamanitra no nampifangaroany ny fitenenana fa vokatry ny fitiavan-tena sy ny avonavon’ny olombelona ihany. Tsy ny fahafahana manao izay tian-katao tsy akory no atao hoe fahafahana (liberté), “libertinage” no hiantsoana izany. Ny fanaovana izay tiana atao dia tsy hitondra antsika ho amin’ny tena fiombonana tsy akory fa vao mainka aza ho amin’ny fisarahana. Ny fikasan’ireo tao Babela hanao tilikambo mba hiombonana indraindray, dia ny fiheveran’izy ireo hiombona amin’ny herin’ny tenany sy ny ezaky ny fisasarany, ka tsy ilàny intsony an’Andriamanitra, ary ny hafa kosa hatao tohatra hiakarana nananika ny tilikambon’i Babela fotsiny ihany.
Fa ny fahasoavan’Andriamanitra kosa no nanorokoro ny fiteniny, nandrava izany kinasa… Ary moa tsy fahasoavana toy izany ve no ventesintsika matetika amin’ny hira hoe : Miantso anao izahay ry Tompo, fa mitady handrava izay kasainay ny Fanahy!!! Ka matahotra izahay… sao fongorany tokoa ny tilikambonay mahatakatra ny lanitra, hiheveranay fa tsy mila Anao intsony izahay hampiombona anay. Mila mandini-tena mandrakariva isika rehefa misy zavatra nokasaina hatao ka rava, sao sanatria vokatry ny fikasan’olombelona fotsiny ihany izany. Mety izany fandravàna izany no fahasoavana hoentin’ny Fanahy hitondra antsika amin’ny Pantekôty vaovao.
Tsy azo adinoina ny lazain’i Md Paoly mikasika ny fitenenana teny tsy fantatra, indraindray ireharehan’ny sasany: “Izay miteny amin’ny teny tsy fantatra dia mahasoa ny tenany ihany, fa izay milaza hafatra avy amin’Andriamanitra kosa dia mahasoa ny Fiangonana… fa raha mivavaka amin’ny teny tsy fantatra aho dia mivavaka ihany ny fanahiko, fa ny saiko tsy mahazo vokatra”. Aleo milaza hafatra avy amin’Andriamanitra toy izay hiteny amin’ny teny tsy fantatra, hoy izy (1 Kor 14, 4-6.14).
I Kristy no Teny zary nofo hampiombona antsika. Izy no Teny tonga Mofo, ka ny Apostoly mitory Azy, mijoro ho vavolombelon’ny fitsanganany dia miteny amin’ny fitenin’ireo firenena 12 vaovao izay entina manambara ny tany tontolo. I Kristy nitsangan-ko velona no manome ny Fanahy, hampianatra antsika fa tsy ny tilikambo ataon’ny tanan’olombelona sanatria no hampiombona sy hitarika amin’ny firaisana (Babela, avy amin’ny babal, manafangaro) fa ny Fanahy Masin’Andriamanitra irery ihany. Izay manaiky hotarihiny no afaka miombona ao amin’ilay Tranon’ny Fitiavana maha-zanaka.
Ny Pantekôty ary, araka izany, dia fiantombohan’ny Fotoanan’ny Fanahy Masina, fahaterahan’ny Fiangonana (jereo ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika n. 766, ka manazava ny fampiasana ny loko mena mitovy amin’ny Zomà Masina). Tsy manafoana fa mandavorary ny Lovam-panahy tao amin’ny Finoana Jody anefa ny Eglizy. Raha ho an’ny Jody dia fetim-pifaliana ny Pantekôty, hanolorana amin’Andriamanitra ny tsara indrindra amin’ny santa-bokatra, mba hisaorana Azy nanome ny Lalàna (Torah), ahoana kosa no hankalazantsika ny Pantekôntintsika?
Ny Vokatry ny Fanahy dia Fitiavana, hoy i Md Paoly mampahatsiaro antsika (Gal 5, 16-25).
Aoka havela eny an-tsaha, hoy ny Lalàna Jody, ny sombintsombiny amin’ny vokatra rehefa mijinja, mba hisy hotsimponin’ny mahantra sy ny vahiny (Lev 23, 22), inona kosa no mba avelantsika ho an’ny mahantra sy ny vahiny amin’ny fombantsika Kristiana, hihoty ny vokatry ny Fanahy?
Mazava loatra fa ny vokatry ny Fanahy izay mitondra fifaliana sy Fiadanam-po io, ka tahirizintsika amin’ny faharetana, ny hamoram-panahy sy ny fahazavam-po,ny finoana (tsy fivadihana) sy ny halemem-panahy ary ny fahalalana onony. Tsy ho filan-dera hitarika filan-kìsa sy fialonana sanatria, fa fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny asam-panafahana, hiekena fa ny marina no maha-olon’afaka (Jn 8, 32) ka tsy misy afa-tsy ny Fanahy Masina no afaka hitarika antsika amin’ny marina rehetra (Jn 15, 26-27; 16, 12-15).
Alahady fankalazana ny Pantekoty TAONA D
Asa 2, 1-11/
Romana 8, 8-17/
Md Joany 14, 15-26
“Izay manana ny didiko sy mitandrina azy no tia ahy”. Mazava ny tenin’i Jesoa. Tsy afaka ny hiteny ho tia ny olona iray ianao raha tsy raharahianao akory ny hafatra navelany. Manana ny didin’i Jesoa izay mitandrina ny teniny am-pinoana ka miezaka mampifanaraka ny fiainana amin’ny fampianarany, amin’ny fitiavana tahaka ny nitiavany.
I Jodasy (rahalahin’i Jakoba Lk 6, 16) dia nihevitra fa ny fisehoan’i Jesoa, ny fanomezan’ny Ray voninahitra azy dia ny fisehoany amin’izao tontolo izao, ho mpanjaka mamirapiratra araka ny fampanantenana ho an’ny taranak’i Davida. Saingy ambaran’i Jesoa mazava, fa tsy voninahitra araka an’izao tontolo izao ny azy, ka izay tsy mandray ny teniny dia manilika ny tenany tsy handray ny famonjena, satria mandà tsy hiaino ny tenin’ny fiainana, mandà tsy handray ny Fanahy Masina Mpanafaka alahelo izay hampianatra ny zavatra rehetra sy hampahatsiahy ny fampianarany, Fanahy izay irahin’ny Ray amin’ny anaran’i Jesoa, izany hoe amin’ny fiombonana aminy, noho ny vavaka ataony (Jn 14, 16).
Ny Fanahy Masina no omen’ny Ray ho antsika mba handavorary ny fiombonantsika aminy, ka hahatonga an’Andriamanitra ho zavatra rehetra ao amin’ny olombelona rehetra (tout en tous, 1 Kor 15, 28). Izy no hahatanteraka ny faminanian’Izaia fa hampianarin’Andriamanitra ny olona rehetra (Iz 54,13), Izy izay nampianatra ny vahoaka tamin’ny Lalàna syn y Mpaminany, niseho ho fantatry ny olona amin’ny fahatongavan’ny Zanany ho nofo ary mampiombona ny olombelona amin’ny fiainany Andriamanitra amin’ny fanomezana ny Fanahy. Izay tia ihany anefa no afaka manandrana izany hafenoan’ny fiainana izany.
Ny Fanahy no hampianatra fa koa hampahatsiaro (ὑπομιμνῄσκω hupomimnesko) izay nampianarin’i Jesoa. Izy no mamerina ao am-pontsika ny teny, satria izay tsy ao amin’ny “tsiaro” dia very any amin’ny fanadinoana. Ny Fanahy fitiavana no mamelona eo anivon’ny fiangonana ny fahatsiarovana an’i Kristy, ka hahafahan’ny Mpino miaina ny fiombonana amin’Andriamanitra izay honina ao amin’izay tia azy.
Meteza ary isika hotarihin’ny Fanahy Masina. Tsy sanatria ho fahazarana fotsiny ny miantso ny Fanahy Masina alohan’ny fivoriana, saingy ny hevitra efa tapaka mialoha sy ny hevitry ny tena ho itadiavana fomba hanamarinana azy.
 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. (Acts 2:5 BYZ): Jody, olona tia vavaka…